शरीरको कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता शरीरको कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन सक्छ
on: १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०७:१९ अन्तरवार्ता
नेपाली समाजमा क्यान्सर भन्नेबित्तिकै डराउने मनोविज्ञान छ । क्यान्सर सम्बन्धी सामाजिक भ्रमले आम मानिसबीच यो प्राणघातक रोगको रूपमा परिचित छ । तर लामो समयदेखि क्यान्सर रोगको उपचार र अध्ययनमा संंलग्न डा. सुदीप श्रेष्ठ क्यान्सरलाई पनि अन्य दीर्घ रोगजस्तै लिनुपर्ने बताउँछन् । ललितपुर हरिसिद्धिमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालका संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल अन्कोलोजिस्ट डा. श्रेष्ठले नेपाल र भारतको विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका छन् । प्रस्तुत छ– क्यान्सर रोग, यसका कारण, लक्षण, उपचार र समसामयिक प्ररिप्रेक्ष्यबारे उनीसँग आर्थिक अभियानका निर्भीक रायमाझीले गरेको कुराकानीको सार :
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०७:५५